कफी शप फ्रेंचाइजी बिक्री को लागी | फ्रेंचाइजी अवसरहरू Franchiseek
»फ्रेंचाइजी अवसरहरू»मिश्र»कफि शप फ्रन्चाइजीहरू
विशेष कफि शप फ्रेंचाइजीहरू
भर्खरको कफि शप फ्रन्चाइजीहरू
कफि निलो फ्रन्चाइज
प्रकाशित गरिएको: ११/०07/२०२०
कफि निलो संग अद्वितीय फ्रन्चाइजी अवसर! ब्यापार कफि ब्लू भूमिबाट उत्तम मोबाइल हुन डिजाइन गरिएको छ ...
प्रकाशित गरिएको: ११/०22/२०२०
कफि व्यवसायमा लगानी गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ मासिक ग्यारेन्टी रिटर्न पाउनुहुन्छ, वार्षिक सामग्रीहरूको एक शानदार हिस्सा, प्लस हामी ...
धेरैको लागि, कफि निस्सन्देह दिनको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। अधिक संग २.२ billion अरब कप विश्वभरि दिनहुँ खपत हुने कफिको, यो सुरक्षित छ कि कफी फ्रन्चाइजीहरू सधैं बढ्दो मागमा हुनेछन् भन्ने कुराको लागि सुरक्षित छ।
हाम्रो कफीको प्रेम १ 15 औं शताब्दीमा मिल्छ र विश्वव्यापी रूपमा एक शीर्ष निर्यात वस्तु भएको छ। कफि मात्र एक पेय पदार्थ भन्दा बढी हो। यो एक विश्वव्यापी घटना हो। यो आकर्षक बजार को फाइदा लिन अब सही समय छ।
कफी फ्रन्चाइजको प्रकार
जब हामी कफि फ्रन्चाइजीको बारेमा सोच्छौं, हामी कोस्टा कफी र स्टारबक्सको बारेमा सोच्छौं। तर कफी फ्रन्चाइजीको संसारमा, यो त्यो भन्दा बढि हो। यहाँ कफी फ्रन्चाइजीहरू सफलतापूर्वक अपरेटिंग भएको पाए।
मोबाइल कफी फ्रन्चाइजीहरू - हामी सबैलाई थाहा छ कि कफि धेरै व्यक्तिको जीवनशैलीको एक ठूलो अंश हो। त्यसकारण मोबाईल कफि फ्रन्चाइजीको साथ, तपाईं व्यक्तिमा कफि ल्याउन सक्नुहुन्छ। मोबाइल कफी फ्रन्चाइजीहरूले कफी बाइक फ्रन्चाइजीहरू समावेश गर्दछ, जहाँ तपाईं आफ्नो बाइकको पछाडि मोबाइल कफी बारको साथ यात्रा गर्नुहुन्छ। कफी निलो एक उत्कृष्ट उदाहरण हो, किट आउट आउट कफी भ्यान सहित जहाँ फ्र्यान्चाइजीहरू विशाल ग्राहक सम्भावनाको साथ घटनाहरू र अन्य सार्वजनिक हटस्पटहरूमा ड्राइभ गर्दछन्।
कफि शप फ्रन्चाइजीहरू - कोस्टा र स्टारबक्स जस्ता फ्रेंचाइजीहरू धेरै ग्राहकहरूको लागि लोकप्रिय विकल्प बनेका छन्, तर यसका अतिरिक्त धेरै फ्रान्चाइजीहरू पनि उनीहरूको व्यवसायको साथ उत्साहजनक मोड लिइरहेका छन्। उदाहरण को लागी, Alchemista कॉफी स्वाद को एक विस्तृत श्रृंखला को कफी ककटेल मा विशेषज्ञ। कफी शप फ्रन्चाइजी अवसरहरूको एक विशाल दायरा छन् जुन तपाईं तल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
कफि शप फ्रेंचाइजीहरूले पनि विक्रि सहित अन्य फ्रेंचाइजी क्षेत्रहरूको एक सीमामा विविधीकरण गर्दछ। कफी शप फ्रेंचाइजीले पनि VAFD मशिन फ्रेंचाइजीहरू समावेश गर्दछ जस्तै CAFELAVISTA को मनपर्दछ।
कफी फ्रन्चाइजी को एक लाभ यो हो कि तपाइँको लागि आफ्नो व्यापार मा, तर आफैले आफैलाई होईन। ब्यापारिक सुरुवातको विपरीत, कफि फ्रन्चाइजी एक प्रमाणित र सफल व्यापार मोडल हो जुन बहु फ्रान्चाइजीहरू र उनीहरूको क्षेत्रहरूमा दोहोरिएको छ।
धेरै कफ फ्रान्चाइजीहरूले उनीहरूको फ्रान्चाइजीहरूलाई जारी समर्थन प्रदान गर्दछ जसको मतलब हो कि तपाईं घरबाट एक व्यवस्थापन फ्रन्चाइजको रूपमा तपाईंको कफी फ्रन्चाइजी चलाउँदै हुनुहुन्छ, वा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको क्याफिन ठीक गर्ने साथमा हुनुहुन्छ, मद्दत सधैं हुनेछ।
जब तपाईं सेवानिवृत्त हुन्छ, तपाईं त्यसपछि एक रिसेलको रूपमा तपाईंको प्रमाणित कफी फ्रन्चाइजी व्यापार मोडेल बेच्न सक्नुहुनेछ।
तल कफि शप फ्रेंचाइजीको दायरा पत्ता लगाउनुहोस्।
कुनै फ्रान्चाइजी शुल्क बिना - बिक्री, भाँडा र सम्पत्ति प्रबन्धनमा विशेषज्ञता कम लागत सम्पत्ति फ्रेंचाइजी पत्ता लगाउनुहोस्! HT घरहरू ...